डा.केसीको सर्वोच्चमा वयनः अदालतमा भ्रष्टाचार छ छ — OnlineDabali
डा.केसीको सर्वोच्चमा वयनः अदालतमा भ्रष्टाचार छ छ
काठमाडौं । डा.गोविन्द केसीलाई निर्धारित समयमै प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराएको छ । अदालतको अपहेलना मुद्दामा सोमबार ९ बजे उपस्थित गराउन अादेशसँगै प्रहरीले डा.केसीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले मंगलबार तोकिएकै समय विहान ९ बजे नै डा.केसीलाई सर्वोच्चमा हाजिर गराएको छ ।
डा.केसीका एक सहयोगका अनुसार अहिले अपहेलना मुद्दाबारे डा.केसीले वयन दिइरहेका छन् । केसीका कानूनी सहयोगीहरुले साथ दिइरहेका छन् । केसीले अदालतभित्र भ्रष्टाचार भएको कुरा सत्य भएको र त्यसमा अाफू तल माथि नहुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा पैसाको खेलमा मुद्दा हेरिने भएका कारण धेरैले न्याय नपाएको दाबी गरे। अनसन बस्दैगर्दा केसीले न्याय किनबेच भइरहेको बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट र माफिया भएको बताएका थिए ।
डा. केसीले अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा सर्वोच्चले सोमबार पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का डीन नियुक्ति प्रकरणमा अदालतको फैसलाविरुद्ध डा. केसीले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर भएको थियो ।
यसैबीच नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई डा. गोविन्द केसीलाई गिरफ्तार गरेको विरोधमा सडकमा निस्केका छन् । मंगलबार विहान माइतिघर मण्डलामा गरिएको प्रर्दशनमा डा. भट्टराई सहभागी भएका छन् ।
डा.केसीलाई अदालतमा उपस्थित गराईएको समयमा डा. भट्टराईले केसीको पक्षमा नारा लगाइरहेका थिए । उनीसँगै रहेका पूर्व पत्रकार तथा विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र पनि सँगै थिए । उनीहरुले डा. केसीको रिहाईको माग गरेका छन् ।
माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल गिरफ्तार हुँदा एक शब्द समेत खर्च नगरेको तर डा. केसीलाई अदालतमा लिँदा सडकमै निस्केको भन्दै डा. भट्टराईको विरोध पनि सुरु भएको छ । जनयुद्धको नेतृत्वकर्तामध्येका एक डा. भट्टराईले अहिलेसम्म पनि ढुंगेलको गिरफ्तारीबारे ‘चू’ सम्म गरेका छैनन् ।
ढुंगेलले जेलभित्रैबाट प्रचण्ड र बाबुरामको निर्देशनमा जनयुद्धमा धेरै कारवाही भएको तर अहिले नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । जनयुद्धकालिन मुद्दामा नबोल्नेहरुले जनयुद्ध गरेर अपराध गरेको स्वीकार गरेको ढुंगेलले बताउँदै आएका छन् ।
उत्तर र दक्षिण कोरियाको वार्ता ‘पिस हाउस’मा जारी